ပြောမနာဆိုမနာ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ…😎 – Trend.com.mm
ပြောမနာဆိုမနာ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ…😎
သင့်အပေါ်မှာ အနွံတာခံပြီးကောင်းတူဆိုးဖက်မျှဝေခံစားလို့ရတဲ့၊ပြောမနာဆိုမနာပေါင်းသင်းလို့ရတဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းမျိုးရှိတယ်ဆို ကံကောင်းတာပါပဲ။ကိုယ်ပေါတိုင်း လိုက်ပေါပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ 😝အခင်ဆုံးမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းရော၊ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဘ၀ကြီးက အတော်လေးနေသာထိုင်သာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်မိသားစု၊အချစ်ရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးစသဖြင့် အဆင်မပြေတာတွေရှိရင်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင်ဖွင့်လို့ရတာကိုး။တကယ်လို့များ “The Kissing Booth” ဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတာဘယ်လောက်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလဲအသိသာကြီးကိုမြင်ရမှာပါ။
ပြီးတော့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းရှိတာ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲကိုယ်ကလှပါတယ်၊အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုဆို ကိုယ်သဘောကျတဲ့ခရက်ရှ်၊ကိုယ့်ချစ်သူရှေ့ရောက်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်ကပဲလိုနေသလိုလို၊ဆံပင်ပုံကပဲမလှသလိုလို တစ်ခုခုလိုနေသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာတော့ ဒါတွေကိုဂရုစိုက်စရာမလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသက်တောင့်သက်သာနေလို့ရပါတယ်။အပေါ်ယံတွေက သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲ မလိုအပ်ပါဘူး 💕
အ၀တ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင်မလိုက်ဘူး။ကြည့်ကောင်းရင်ကြည့်ကောင်းတယ်စသဖြင့်ဝေဖန်မယ်။အကြံပေးမယ်။ယောက်ျားလေးအမြင်နဲ့ဘယ်အ၀တ်အစားကတော့ ဘယ်လိုဆိုပြီး အကြံတောင်ပေးရင်ပေးဦးမှာပါ။ကိုယ့်ချစ်သူလို ကိုယ်စိတ်ညစ်သွားမှာစိုးလို့ညာပြောတာမျိုးလည်းမရှိ၊ကိုယ့်ကိုအပေါ်ယံပေါင်းတဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေလို မလှတဲ့အ၀တ်အစားကိုလှတယ်ဆိုပြီးပြောတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့။
ကိုယ့်ချစ်သူက ဒီသီချင်းလေးကြိုက်လို့ လိုက်ကြိုက်မယ်။ကော်ဖီကြိုက်လို့ လိုက်သောက်မယ်။ကိုယ်တကယ်ကြိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ကိုယ်မကြိုက်ပဲချစ်သူက သဘောကျဖို့လိုက်ကြိုက်တာမျိုးကတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးတွေကြိုးစားပြီးလိုက်ကြိုက်နေစရာကိုမလိုပါဘူး။သူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်ဆွေးနွေးမယ်။တစ်ခါတစ်လေ နှစ်ယောက်သားအကြိုက်တူရင်တူမယ်။အတင်းကြီးကြိုးစားနေစရာမလိုတာကိုက စိတ်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ရတဲ့အားသာချက်က ဒီတစ်ခုလည်းပါတာပေါ့နော် 🤫ကိုယ့်ချစ်သူဆိုရင် ချစ်သူများနေ့၊နှစ်ပတ်လည်နေ့၊မွေးနေ့၊ခရစ်စမတ်၊နယူးရီးယားစသဖြင့် အမှတ်တရနေ့တိုင်း လက်ဆောင်တစ်ခုခုပေးဖို့လိုပေမဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ တကူးတကလက်ဆောင်ပေးစရာမလိုပါဘူး။အလွန်ဆုံးမွေးနေ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေါ့။ဒါတောင် နှစ်တိုင်းပေးဖို့မလိုပါဘူး။မပေးလို့လည်းစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရနေ့တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေအတူတူ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးမယ်ဆို ဒါကလက်ဆောင်ပါပဲ။ချစ်သူကျတော့ မပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း သူပေးရင်ကိုယ်ကလည်းပြန်ပေးချင်တာကိုး 🤭
၅)Best Friend Forever ပါ
ချစ်သူရည်းစားဆိုတာ အဆင်မပြေလို့လမ်းခွဲပြတ်စဲပြီးရင် ပြန်မတွေ့ကြတော့မယ့်သူတွေဆိုပေမဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ရန်ဖြစ်ပြီးသိပ်မကြာခင် ပြန်ခေါ်ကြတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေမို့လို့ပါ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်နာရလောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလုပ်မိရင်တောင်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လို့ အချိန်တန်ရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားကြတာပါပဲ။ကိုယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တိုင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်တိုင်းလည်းနှစ်သိမ့်ပေးတာသူတို့ပါပဲ ❤
မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေရှိတာကောင်းသလို ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေရှိတာလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆို ကိုယ်တွေမသွားရဲမလာရဲတဲ့နေရာဆို သူတို့ကိုအရင်ဆုံးသွားခိုင်းလာခိုင်း၊အကူအညီလိုတာရှိရင်တောင်းလိုက်၊အနိုင်ကျင့်လိုက်နဲ့ အားကိုးလို့ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ 🤭ဟုတ်ရဲ့လား?
ကဲ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အပေါ် ညီမတစ်ယောက်လိုသဘောထားတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်လေး ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီလား? 😎
သငျ့အပျေါမှာ အနှံတာခံပွီးကောငျးတူဆိုးဖကျမြှဝခေံစားလို့ရတဲ့၊ပွောမနာဆိုမနာပေါငျးသငျးလို့ရတဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးမြိုးရှိတယျဆို ကံကောငျးတာပါပဲ။ကိုယျပေါတိုငျး လိုကျပေါပေးတဲ့ သူငယျခငျြးမြိုးရှိရငျပိုကောငျးတာပေါ့ 😝အခငျဆုံးမိနျးကလေးသူငယျခငျြးရော၊ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးပါ ပိုငျဆိုငျထားတယျဆိုရငျတော့ ဘဝကွီးက အတျောလေးနသောထိုငျသာရှိတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။
ကိုယျ့မိသားစု၊အခဈြရေး၊လူမှုရေး၊စီးပှားရေးစသဖွငျ့ အဆငျမပွတောတှရှေိရငျသူတို့နဲ့တိုငျပငျဆှေးနှေးရငျဖှငျ့လို့ရတာကိုး။တကယျလို့မြား “The Kissing Booth” ဇာတျကားလေးကွညျ့ပွီးပွီဆိုရငျ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးတဈယောကျရှိတာဘယျလောကျကနြေပျပြျောရှငျစရာကောငျးလဲအသိသာကွီးကိုမွငျရမှာပါ။
ပွီးတော့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးရှိတာ ဒီလိုအကြိုးကြေးဇူးတှပေါ ရရှိနိုငျပါတယျ။
ဘယျလောကျပဲကိုယျကလှပါတယျ၊အလှအပနဲ့ပတျသကျပွီးယုံကွညျခကျြရှိပါတယျဆိုဆို ကိုယျသဘောကတြဲ့ခရကျရျှ၊ကိုယျ့ခဈြသူရှရေ့ောကျတဲ့အခါ မိတျကပျကပဲလိုနသေလိုလို၊ဆံပငျပုံကပဲမလှသလိုလို တဈခုခုလိုနသေလိုခံစားရတတျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးတှရှေမှေ့ာတော့ ဒါတှကေိုဂရုစိုကျစရာမလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသကျတောငျ့သကျသာနလေို့ရပါတယျ။အပျေါယံတှကေသူငယျခငျြးတှကွေားထဲ မလိုအပျပါဘူး 💕
အဝတျအစားနဲ့ပတျသကျလို့ ကိုယျနဲ့မလိုကျရငျမလိုကျဘူး။ကွညျ့ကောငျးရငျကွညျ့ကောငျးတယျစသဖွငျ့ဝဖေနျမယျ။အကွံပေးမယျ။ယောကျြားလေးအမွငျနဲ့ဘယျအဝတျအစားကတော့ ဘယျလိုဆိုပွီး အကွံတောငျပေးရငျပေးဦးမှာပါ။ကိုယျ့ခဈြသူလို ကိုယျစိတျညဈသှားမှာစိုးလို့ညာပွောတာမြိုးလညျးမရှိ၊ကိုယျ့ကိုအပျေါယံပေါငျးတဲ့မိနျးကလေးသူငယျခငျြးတှလေို မလှတဲ့အဝတျအစားကိုလှတယျဆိုပွီးပွောတာမြိုးလညျးမရှိဘူးပေါ့။
ကိုယျ့ခဈြသူက ဒီသီခငျြးလေးကွိုကျလို့ လိုကျကွိုကျမယျ။ကျောဖီကွိုကျလို့ လိုကျသောကျမယျ။ကိုယျတကယျကွိုကျရငျတော့ကောငျးတာပေါ့။ကိုယျမကွိုကျပဲခဈြသူက သဘောကဖြို့လိုကျကွိုကျတာမြိုးကတော့ အဆငျမပွဘေူးပေါ့နျော။ဒါပမေဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးနဲ့ဆိုရငျတော့ ဒီလိုမြိုးတှကွေိုးစားပွီးလိုကျကွိုကျနစေရာကိုမလိုပါဘူး။သူ့အကွိုကျကိုယျ့အကွိုကျဆှေးနှေးမယျ။တဈခါတဈလေ နှဈယောကျသားအကွိုကျတူရငျတူမယျ။အတငျးကွီးကွိုးစားနစေရာမလိုတာကိုက စိတျခမျြးသာခွငျးတဈမြိုးပါပဲ။
အခငျဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈရတဲ့အားသာခကျြက ဒီတဈခုလညျးပါတာပေါ့နျော 🤫ကိုယျ့ခဈြသူဆိုရငျ ခဈြသူမြားနေ့၊နှဈပတျလညျနေ့၊မှေးနေ့၊ခရဈစမတျ၊နယူးရီးယားစသဖွငျ့ အမှတျတရနတေို့ငျး လကျဆောငျတဈခုခုပေးဖို့လိုပမေဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးတှကေိုတော့ တကူးတကလကျဆောငျပေးစရာမလိုပါဘူး။အလှနျဆုံးမှေးနအေ့မှတျတရလကျဆောငျပေါ့။ဒါတောငျ နှဈတိုငျးပေးဖို့မလိုပါဘူး။မပေးလို့လညျးစိတျဆိုးမှာမဟုတျပါဘူးနျော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုအမှတျတရနတှေ့မှော သူငယျခငျြးတှအေတူတူ စားလိုကျသောကျလိုကျနဲ့အခြိနျကုနျဆုံးမယျဆို ဒါကလကျဆောငျပါပဲ။ခဈြသူကတြော့ မပေးလို့ရတယျဆိုပမေဲ့လညျး သူပေးရငျကိုယျကလညျးပွနျပေးခငျြတာကိုး 🤭
ခဈြသူရညျးစားဆိုတာ အဆငျမပွလေို့လမျးခှဲပွတျစဲပွီးရငျ ပွနျမတှကွေ့တော့မယျ့သူတှဆေိုပမေဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးတှကေတော့ ရနျဖွဈပွီးသိပျမကွာခငျ ပွနျချေါကွတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူငယျခငျြးတှမေို့လို့ပါ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျစိတျနာရလောကျတဲ့ကိစ်စမြိုးလုပျမိရငျတောငျသူငယျခငျြးတှဖွေဈလို့ အခြိနျတနျရငျပွနျအဆငျပွသှေားကွတာပါပဲ။ကိုယျစိတျညဈနတေဲ့အခြိနျတိုငျး၊စိတျဓာတျကနြတေဲ့အခြိနျတိုငျးလညျးနှဈသိမျ့ပေးတာသူတို့ပါပဲ ❤
မိနျးကလေးသူငယျခငျြးတှရှေိတာကောငျးသလို ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးတှရှေိတာလညျး ပိုကောငျးပါတယျ။ဘာလို့ဆို ကိုယျတှမေသှားရဲမလာရဲတဲ့နရောဆို သူတို့ကိုအရငျဆုံးသှားခိုငျးလာခိုငျး၊အကူအညီလိုတာရှိရငျတောငျးလိုကျ၊အနိုငျကငျြ့လိုကျနဲ့ အားကိုးလို့ရတဲ့သူငယျခငျြးတှပေါ 🤭ဟုတျရဲ့လား?
ကဲ ဒီလိုမြိုး ကိုယျ့အပျေါ ညီမတဈယောကျလိုသဘောထားတဲ့သူငယျခငျြးကောငျလေး ပိုငျဆိုငျထားရပွီလား? 😎
ဒရာမာ ဇာတ်ကားသစ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လို character မျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ ?
ချစ်သူစုံတွဲတွေ ရုပ်ချင်းဆင်လာကြတာ ဘာလို့လဲဆိုတော့…💕